Manchester United oo gaartay Guul kaloo wayn xilli uu Pogba muujiyay inuu ka Reystay Mourinho + SAWIRO – Gool FM
Manchester United oo gaartay Guul kaloo wayn xilli uu Pogba muujiyay inuu ka Reystay Mourinho + SAWIRO
Dajiye December 30, 2018
(Premier League) 30 Dis 2018.Manchester United ayaa guul raaxa leh gaartay, waxay 4-1 kaga badisay kooxd kooxda Bournemouth, tababare Ole Gunnar Solskjær ayaana la gaaray Red Devils guushiisii saddexaad ee xiriir ah.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barabro 3-1, iyadoo laba dhinac ay fursado dhawr sameeyeen laakiin ma suuragalin in ay iska dhaliyaan goolal intaas ka badan.
Daqiiqadii 5-aad ee dheesha Paul Pogba ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester United, kadib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Marcus Rashford, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Paul Pogba ayaa markale gaaray shabaqa kooxda Bournemouth daqiiqadii 33-aad wuxuuna ciyarta ka dhigay 2-0, waxaana caawinta goolkan lahaa Ander Herrera.
Manchester United ayaan sidaas ku aamusin ku dhawaad gaba gabada qeybta hore ee ciyaarta gaar ahaa daqiiqadii 45-aad Marcus Rashford ayaa dheesha ka dhigay 3-0, waxaana goolka ka caawiyay saaxiibkiis Anthony Martial.
Laakiin kooxda martida ahayd ee Bournemouth ayaa la timid gool isla daqiiqadii 45-aad waxaan u dhaliyay Nathan Ake oo caawin ka helay David Brooks, waxaana qeybta hore lagu kala nastay 3-1.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay ayay markale kooxaha Manchester United iyo Bournemouth sameeyeen fursado dhow ah ay goolal ku dhalin kareen, iyagoo sameeyay fursado weerar iyo weerar celis ah.
Daqiiqdii 72-aad Romelu Lukaku oo badal ciyaarta ku soo galay ayaa dheesh ka dhigay 4-1, xili uu caawinta goolkan lahaa Paul Pogba.
Paul Pogba ayaa dhliyay 4 gool wuxuuna sidoo kale sameeyay 3 caawin ah, tan iyo markii Jose laga ceyriyay shaqada kooxda Manchester United.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 4-1 ay guusha ku raacdy Manchester United, taasoo ka dhigan inay tahay guushii saddexaad xiriir ah uu kooxda Red Devils la gaaray macalinka ku meel gaarka ah ee Ole Gunnar Solskjær.
Isco oo ugu dambeyn afka furtay......(Muxuu yiri?)
December waa Bishii ugu fiicneyd Ebid waayaha ciyaareed ee Pogba....(Sidee????)